ဆင်ဖြူတော် Garment Factory အတွက် စကားပြန်အလိုရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » ဆင်ဖြူတော် Garment Factory အတွက် စကားပြန်အလိုရှိ
ဆင်ဖြူတော် Garment Factory အတွက် စကားပြန်အလိုရှိ
Posted by etone on Aug 26, 2011 in Jobs & Careers | 8 comments
ရွာသူရွာသားတို့ရေ… အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်း ရှားပါးလာချိန် … ကြောငြာတဲ့ အလုပ်တွေကို ၀င်လျှောက်ရင်း အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး … နောက်ဆုံး လက်လှမ်းမှီရာ ၊ နီးစပ်ရာကိုပဲ ရွေးချယ်သွားခဲ့လို့ … အလုပ်မရှိပဲ .. စိတ်ညစ်နေတဲ့များရှိနေသလား … ? ဒီခေတ်မှာ လစာ တစ်သိန်းနဲ့ အထက်ရတဲ့အလုပ် .. .. ၀င်ဝင်ခြင်း မျက်နှာသစ်တွေကို သိပ်မပေးတတ်တာမို့ ကိုရီးယားဘာသာစကားလေးတစ်ခုတက်ထားရုံနဲ့ … ပထမ၀င်ဝင်ခြင်း လစာ တစ်သိန်းကျော်ရမယ့်အခွင့်ရေး ရယူလိုပါသလား … ? နယ်ကလူတွေ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ချင်သော်လည်း နေစရိတ် ထောင်းနေမှာ တွေးပူနေရပါသလား ။ ? ပင်ပင်ပန်းပန်း ဦးနှောက်မစားရတဲ့ သူဌေးရဲ့လက်စွဲတော် … ဘာသာပြန်အလုပ်မျိုး လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ ရှိပါသလား … ? သန်လျှင်မှာရှိတဲ့ ဆင်ဖြူတော် အထည်ချုပ်စက်ရုံက ကိုရီးယားစကားပြန်တစ်ယောက် လိုနေလို့ပါ …။ အသက်ပိုင်းခြား ကန့်သတ်မထားပဲ … ယောကျာ်းမိန်းမ မည်သူမဆို စိတ်ဝင်စားလျှင် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ် … ။ လစာအနေနှင့် ပထမဆုံး အောက်ထစ် တစ်သိန်း နှစ်သောင်းကို ၀င်ဝငိခြင်း လအတွက်ရမှာပါ …နောက်ပိုင်း စကားပြော ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှူပေါ်မူတည်ပြီး တဆင့်ဆင့် လစာညှို နှိုင်းခွင့်လည်း ရှိပါတယ် .. ။ နေထိုင်ဖို့အတွက်တော့ … သန့်ပြန့်ပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့ (ရေမီးစုံပါ ) စက်ရုံနှင့်အနီးဆုံးနေရာက အဆောင်မှာ နေထိုင်ခွင့် ရရှိမှာပါ … ။ ရုံးချိန်ကတော့ … စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်တက်ချိန် မနက် ခုနှစ်နာရီခွဲကနေ … ညနေရှစ်နာရီအ ထိပါတဲ့လေ … ။ အရည်ချင်းပေါ်မူတည်ပြီး ရွှေးချယ်မှာမို့ … အသိကျွမ်းမရှိလည်း အလုပ်ဝင်လျှောက်လို့ရပါတယ် … ။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ ၊ ကိုယ်တိုင်အလုပ်လျှောက်ချင်လျှင်တော့ အောက်က လိပ်စာအတိုင်း သွားလျှောက်နိုင်ပါတယ် .. စီဗီတော့ အပြည့်စုံယူသွားပေါ့နော် … ။ ဆင်ဖြူတော် အထည်ချုပ်စက်ရုံ (Royal White Elephant) အမှတ်(၂၇) စိုက်ပျိုးရေးလမ်း။အမှုထမ်းရပ်ကွက်။သန်လျင် (သန်လျင်ကားစီးလာရင် ကျားဘုရားမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ)။ သိလိုသမျှကို အီးမေးလ် etone.mandalaygazette@gmail.com သို့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ comment ပေး၍ဖြစ်စေ … မေးမြန်း စုံစမ်း နိုင်ပါတယ် … ။
အလုပ်တော့ လိုချင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားစကားကို ပြောတာနားလည်ပြီး ပြန်မပြောတတ်လို့ပါရှင်။
အစ်မနားလည်တာ …အာနီယိုဆယ်ယိုတို့ … ယောက်ပေါတို့ … အာဘောကြီးတို့ .. အိုမားတို့ ..အိုပါးတို့…အော်နီးတို့… အောမောနီးတို့ …အားဂျူးမတို့ … ဂါဂျာတို့ … အာနိယိုတို့ .. မိုလာယိုတို့ … ဂျိုအာယိုတို့ … ဆာရမ်းနှယ်တို့အပြင် ရှိသေးလားဟင် …
ဟီးဟီး … အစ်မ မနောက အတော် နောက်တတ်တာပဲ … နားလည်ပြီး ပြန်မပြောတတ်ဘူးတဲ့ မှတ်သားလောက်ပါတယ် … ဟဲဟဲ … ။
မိုးသီတာလား မနီလာ လားသူကအလုပ်ထွက်သွားလို့လားဗျ
ရောက်ရာအရပ်က အမြန်ပြန်လာပါ …
သင့်နဲ့သင့်တော်မယ့်အလုပ်တစ်နေရာ တွေ့ထားပြီ …
ကိုတညင်သားက ကိုးရီးယားစကားတတ်တယ်ပေါ့။အလုပ်တနေရာတော့ရှာတွေ့ ပီပေါ့။ကံကောင်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် မမဝေ
ဂဒါဖီ ဖမ်းနိုင်သူ ဆုငွေရမည်
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – ဗုဒ္ဓဟူး, 24 သြဂုတ် 2011
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာ ဂဒါဖီ (Moammar Gadhafi) ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၆၇၀,၀၀၀ ပေးမယ်လို့ အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေက ဆုငွေထုတ်လိုက်ပါတယ်။
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်တဲ့ အနေနဲ့ ဒေသခံ စီးပွားရေးသမားတွေက ဆုငွေပေးမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း အသွင်ကူးပြောင်းရေး အမျိုးသားကောင်စီ အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မူစတာဖာ အက်ဘ်ဒဲလ် ဂျာလေလ် (Mustafa Abdel Jalil) က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
အစိုးရကို သစ္စာခံတပ် တချို့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မြို့တော် ထရီပိုလီ (Tripoli) နဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ ဆက်လက် ခုခံနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်ပွဲတွေလည်း အပြင်းအထန် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ ၉၀% အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အတိုက်အခံတွေက ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဘယ်မှာရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ အမေရိကန် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ သူဟာ လစ်ဗျားနိုင်ငံထဲမှာပဲ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
လစ်ဗျား အသွင်ကူးပြောင်းရေးကောင်စီ အကြီးအကဲကတော့ ဂဒါဖီကို the Hague မြို့က နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံးမှာ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်တွင်းမှာသာ တရားရုံးတင် အရေးယူဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဒီအတောအတွင်း လစ်ဗျားနိုင်ငံက လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲက ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁,၅၀၀ ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တွေ ပါဝင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တရပ်ကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ချမှတ်နိုင်ဖို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အမေရိကန်က ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂက ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေအရ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြန်ပေးရေး လုံခြုံရေးကောင်စီထဲက မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းနေကြောင်းလည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံက ပြောဆိုခဲ့သလို လစ်ဗျားကို ကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေနေတယ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံကလည်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ရုရှားနိုင်ငံက အတိုက်အခံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုနေချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ပဋိပက္ခတွေနောက်ပိုင်း ဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင် ကုလသမဂ္ဂက ဦးဆောင်မှု ပေးသွားဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရပါလိမ့်မယ် အားကြီးကြီး။ ရရစားစား ၁ သိန်း ကနေ ၁သိန်းခွဲ ခေတ်က ကုန်ပြီ ။
ကကြီးတွေ အရမ်းရိုးလွန်းတယ်။ သံလျှင်မြို့ ထဲ မသွားခိုင်းနဲ့ ။
အခုက UFL ကျောင်းဆင်း ချွတ်တားလေးတွေတောင် အနည်းဆုံး ၃ သိန်းမှ မရရင် မလုပ်ဘူး။
စက်ရုံ အလုပ်ဆို NO!!…… အထည်ချုပ်ဆိုရင် ပိုပြီးတောင် NO!!!…..
အခု ကျောင်းဆင်းတဲ့ ကလေးတွေ အားလုံးနီးပါးက အဆင်ပြေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေများတယ်။
သူတို့ က အိမ်မှာ နေရင်း ကကြီး ဇာတ်ထုတ်တွေ ဘာသာပြန်ရင်တောင် တစ်ခန်းကို ၈ သောင်း ရတယ်။
သံလျှင်လိုနေရာမျိုးကို ဘယ်သွားမလဲ။ အထူးသဖြင့် ဆင်ဖြူတော်လို နေရာမျိုး။
အဲကြားထဲ အီလန်က လူရှုပ်တွေကလဲ လက်ကသွက်သေး။ ဟီး ဟီးး
မြန်မာပြည်မှာ ကျုပ် Junior တစ်ယောက် (မိန်းကလေး) မြန်မာငွေ ၈ သိန်းရသဗျာ။
အားကျပါ့။ ပုံပြင် မဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ်။ ဒါပေမဲ့ ကကြီးလုပ်ငန်းတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဂျပန် လုပ်ငန်း။ အဲဒီ ကကြီးကောင်တွေက တပဲ ခြောက်ပြားပေးပြီး မြန်မာတွေကို ခေတ်သစ် အရင်းရှင်